गगन थापा किन अमेरिका पढ्न थाले, कसले व्यहोर्दैछ उनको सबै खर्च ? - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१९ चैत्र २०७५, मंगलवार १७:५३ April 3, 2019 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा अहिले अमेरिकामा छन् । तर उनी अहिले अमेरिकामा कुनै राजनीतिक प्रयोजनले हाेइन, पढ्न गएका हुन् ।
केही समय अगाडि मात्रै अमेरिकामा पढेको र निरन्तर रूपमा अमेरिकी अधिकारीहरूको सम्पर्कमा रहेको गगन थापा जस्तै उमेरको र भेनेजुएलाको एक मात्र संसदको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेत रहेको खुँवा गोइएदोले अमेरिकाको समर्थन्‌मा दुई तिहाई जनाताको समर्थन प्राप्त भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको विरूद्ध ‘कू’ गर्ने केटौले प्रयास गरेको थियो । कतै कच्चा उमेर र अत्यधिक धेरै महत्त्वाकाङ्‌क्षी स्वभाव भएका काँग्रेस नेता थापालाई अर्को गुइएदोको रूपमा तयार गर्न लागिएको त होइन ? कुटनीतिज्ञहरूको बीचमा चर्चा भइरहेको छ । यसबारे नेता गगन थापाले भने कुनै प्रतिकृया जनाएका छैनन् । लेफ्टरिभ्यु